Xeebaha ugu fiican Ibiza | Wararka Safarka
Xeebaha ugu fiican Ibiza
Mariela Carril | | Ibiza, Xeebaha
Ibiza Waxay ku taal badda Mediterranean waxayna qayb ka tahay Jasiiradaha Balearic, waxay leedahay 210 kilomitir oo xeeb ah iyo qaar ka mid ah xeebaha ugu caansan uguna quruxda badan Spain. Ma taqaan iyaga? Miyaadan arag waqtiga ay tahay xagaaga 2022 si aad ugu raaxaysato?
Maanta, gudaha Actualidad Viajes waan ognahay xeebaha ugu fiican Ibiza markaa diyaarso tilmaame ... iyo shandadda!
2 Xeebaha ugu fiican Ibiza
Waxaa weheliya Menorca, Mallorca iyo Formentera waa qayb ka mid ah Jasiiradaha Balearic. Xeebaha iyo xeebaha waa riyo, laakiin sidoo kale waa dhammaan dalxiiska iyo adduunka fasaxa oo dhisnaa sannado badan. Maanta, Ibiza waxay la mid tahay xaflad
Ibiza waxay 79 kilomitir u jirtaa xeebta qaaradda, waxay leedahay a cimilada diiran waxaana soo maray hijrooyin waaweyn qarnigii XNUMXaad. Dad badan oo ka mid ah, oo faqri soo weeraray, waxay ka tallaabeen badaha Aljeeriya iyo Cuba. Qarnigii labaatanaad si fiican ayuu u soo galay, qiyaastii sanadaha '60 iyo '70goorma dalxiiska ayaa bilaabay inuu koro waxayna soo saartay horumarkeeda.
Maanta waxaad tiraahdaa Ibiza oo waxaad tiraahdaa nolosha habeenkii, xafladda, diskooga, xeebaha iyo dhallinyarada.
Waa la tiriyaa 80 xeebood xeebta Ibiza oo waxaa jira wax walba, laga bilaabo xeebaha xasilloon oo dabacsan iyo meel fog ilaa xeebo aad loo yaqaan, boodh -dhagax, xeebaha ciidda sonkorta iyo xeebo aad u firfircoon.
Dhanka bari waxaa jira a xeeb aad loo jecel yahay oo la yaqaan maxaa yeelay waxay leedahay biyo deggan oo aad ugu fiican carruurta, marka lagu daro dukaamada iyo maqaayadaha ku xeeran. Waan ka hadlayaa Cala Longa, leh ciiddeeda dahabka ah iyo qaabka arc. Halkaan waxaad ku qori kartaa qorraxda, baro inaad quusto, ku ciyaarto kubbadda laliska xeebta iyo waxyaabo kaloo badan.
Xeebta ugu dhow magaalada Ibiza lafteeda ayaa ah Talamanca, oo leh ciid dahab ah iyo alwaax alwaax ah. Waxaa inta badan soo booqda dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka, waxaa jira maqaayado leh xoogaa qiimo cusbo leh waana oo ay aad u buux dhaafiyeen dhallinyaradu ka dib naadi. Waxaad u malayn kartaa in sababta oo ah waxay u dhowdahay caasimadda ay jirto aad u badan dadka laakiin sidaas ma aha, gaar ahaan subaxdii ama galabtii dambe.
Dhanka koonfureedna waa La Salinas, xeebta ugu dabbaaldegga ee Ibiza (ama sidaas bay yiraahdaan). Hayso habeenkiiMar walba waxaa jira dhallinyaro, waxaad mar walba ku dheeli kartaa ciidda, qadeyn kartaa, casheyn kartaa ama nasin kartaa. Si aad u degganaato oo aad ugu raaxaysato dabeecadda, waa meesha Beerta Qaranka ee Las Salinas Sidoo kale, waxaa lagugula talinayaa inaad u lugayso munaaradda indha -indheynta ee ku taal dhammaadka koonfureed ee jasiiradda maaddaama ay halkaas ku yaalliin godad yaryar.
Cala d'Hort waxaa laga keenay ciidda dahabka ah waxayna leedahay aragtiyo aad u weyn oo ku saabsan jasiiradda Es Vedra, oo ku taal cirifka, dhowr boqol oo mitir u jirta xeebta. Waxaa jira doonyo, doonyo, iyo xilliga sare waxaa jira dad aad u qabow ku raaxaysanaya makhaayadaha, ka -soo -noqoshada iyo ka -noqoshada doonyaha ku xira badda.
La Playa d'en Bossa waa mid aad u ballaaran, waa run ahaantii xeebta ugu dheer Ibiza oo uu leeyahay naadiga ugu caansan oo dhan, iyo kuwo kale oo ku wareegsan. Habeenku wuxuu ka bilaabmaa diskooga laakiin badiyaa wuxuu ku sii socdaa xeebta.
Galbeedka jasiiradda waa Cala Conta, mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan dad badan. Waxay leedahay ciid cad oo jilicsan iyo biyo cad, waa qurux laakiin mar walba dad baa jira. Waxaad aadi kartaa galabtii oo aad joogi kartaa si aad uga fiirsato qorrax -dhaca quruxda badan iyo dahabka ah ama dabaylaha barkadaha dabiiciga ah ee xeebta, inta u dhexeysa dhagaxyada ...
Cala Saladeta waa luul kale oo ku jira xeebta galbeed, iyo si aad halkaas u timaadid waa inaad ka gudubtaa dhagaxyada qaarkood. Waa gacan yar oo leh ciid dahab ah iyo biyo cad oo dhalaalaya. Dadka aad arki doonto badiyaa waa dhallinyaro oo waxay keenaan cuntadooda iyo cabbitaankooda si ay maalinta u qaataan sidii ma jiraan baararka xeebta aragtidiisa. Dabcan, waxay u muuqataa in cabitaannada la iibiyo. Sidoo kale xeebta galbeed waa Cala Tarida, xeeb ay ku badan yihiin qoysaska iyo sidoo kale dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka iyo lammaaneyaasha.
Ee Cala Tarida waxaa jira diskooga, maqaayado, biyo deggan oo cad, dhammaan maaddooyinka si xilliga xagaaga ay macno ahaan u noqoto xeeb qarxisa. Haddii aad jeceshahay wax ka aamusan, waa inaad aaddaa woqooyi halkaas oo ay ku yaalliin godad yaryar.
Iyo xeebaha waqooyi? Halkan waa Biyo Cad, xeeb ciid cad ah oo ku xeeran Dhagaxyada cajiibka ah. Waa a xeebta dabiiciga ah dadka deegaankuna waxay u badan yihiin inay ku urursan yihiin koonfurta xad -dhaafka ah ee xeebta. Markay dabayl jirto, hirar yaryar ayaa samaysma, oo leh baalal cad, sidaa darteed magaca. Waa meel aad u fiican oo lagu arko qorrax -soo -baxa.
Sidoo kale xeebta waqooyi ayaa ah Xeebta Benirras, ku wareegsan dhagaxyada iyo geedaha, ciid, dhagxaan iyo dhagxaan dhexdooda. Biyuhu, aad bay u cad yihiin oo aad bay ugu fiican yihiin hurdada. Waa xeebta Farta Eebbe qorraxduna waa wax adduun kale ka yimid. Waxay sheegaan in maalinta ugu wanaagsan ee la aadi karo xeebtaan ay tahay Axadda marka suuqa maxalliga ah la abaabulo. Xilliga sare basku wuu yimaadaa suurtogalna ma aha in lagu yimaado baabuur mar haddii wadadu u xidhan tahay gaadiidka.
La Cala Jondal Waa dabool dabiici ah oo ku xeeran dabeecad qurux badan, oo leh geedo geed iyo guryo qurxoon. waa kan Caweyska Blue Marlin, halkaas oo dad badan oo caan ah ay aadaan. Waa xeeb dhagxaan iyo super moodada marka ay timaado cunista, cabbitaanka, baashaalka oo la arko. Mid kale oo caan ku ah diskooga ayaa ah Cala Bassa, oo leh ciid cad oo ku dhowaad postal. Halkan waxaa ah Naadiga Xeebta Cala Bassa, si ay wax u cunaan, u cabbaan una dheesha.
Waxaad si fudud ku gaari kartaa Cala Bassa 15 daqiiqo oo ka socota San Antonio adoo adeegsanaya baska 7. Cala Xuclá waa mid ka mid ah xeebaha ugu yar uguna dayactirka badan jasiiradda. Ma jiraan baararka, musqulaha, iyo waxqabadyada la bixiyo. Waa xeeb xasilloon oo xasilloon, oo ay ku hareereysan yihiin geedo geed, leh doonyo kalluumaysi iyo a jawi aad u rustic.
Sa Caleta Waa xeeb oo ku wareegsan qarar casWaxay xusuusinayaan Grand Canyon ee Colorado, ee Maraykanka. Xeebtaan ayaa 15 daqiiqo oo kaliya u jirta magaalada Ibiza. Waxay leedahay biyo deggan sidaas darteedna aad bay caan u tahay, waxaana jira makhaayad caan ah oo u adeegta kalluunka dhadhan fiican leh iyo cuntada badda. Xeebta waa caan laakiin qararkeeda waxay siisaa dareen asturan.
Dabcan, kuwani kaliya maahan Xeebaha IbizaWaxaa jira kuwo kale oo badan, markaa haddii aad rabto inaad ogaato oo aad ku noolaato waayo -aragnimada Ibiza ... ha seegin 20222!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Ibiza » Xeebaha ugu fiican Ibiza